Midowga Yurub oo qorsheynaya inuu liiska madow ku daro Sacuudiga dhinaca lacagaha… – Hagaag.com
Midowga Yurub oo qorsheynaya inuu liiska madow ku daro Sacuudiga dhinaca lacagaha…
Posted on 8 Febraayo 2019 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Midowga Yurub ayaa wuxuu qorsheynayaa in uu ku daro Sacuudiga liiska dalalka ku fashilmay in ay la dagaallamaan lacagaha la dhaqay, Financial Times ayaa sidaasi werisay.
Wargeyska ayaa sheegay in talaabada Yurub ugu biirin doonto Sacuudiga liiska madow ee lacagaha sharci darada ah ayaa imaneysa fashilkeeda arrintaasi, inkastoo ay ka soo horjeedaan Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska.
Financial Times ayaa ka soo xigatay mas’uuliyiin ka tirsan EU ayaa u sheegay in liiska ay ka mid noqon doonto Sacuudiga iyo in ka badan 20 dal oo kale, iyaga oo lagu eedeynayo in ay ka gaabiyeen in ay la dagaalamaan la socodka lacagaha sharci darada ah.
Go’aanka Brussels ay rabto in ay ugu darto Riyadh liiska ayaa sababay khilaaf u dhexeeya Guddiga Midowga Yurub iyo qaar ka mid ah dalalka waaweyn ee xubnaha ka ah Midowga Yurub oo muujiyay in ay mucaaradsan yihiin in Yurub ay qaadato mowqif ka dhan ah burcada lacagta uu ka adag yahay mowqifyada hay’adaha kale ee caalamiga ah.
Dowladda Sacuudiga iyo xulufadeeda, oo ay ku jiraan Mareykanka, ayaa sidoo kale ku cadaadiyay Brussels sidii looga reebi lahaa liiska dalka Sacuudiga. sida ay sheegtay Financial Times.
Wargeyska ayaa arkay qoraal shaaca ka qaaday in wadamada Yurub oo kala ah Britain France, Spain, Italy, Belgium iyo Greece ay dhaleeceeyeen qabyo qoraalkan inta lagu guda jiray shirkii danjirayaasha ay yeesheen todobaadkan.